Ukuhanjiswa kwiiyure ze-2 ngexabiso le-€ 0 yongezwa kwiivenkile ze-Apple | Ndisuka kuMac
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abanevenkile yeApple kufutshane nekhaya, ngoku ungayonwabela ukuhanjiswa simahla kwiiyure ezimbini zezinto ezikwi-Apple Store ezithengwe ngaphambi kwe-24/12/21 ngo-12:00. emini. Njengoko sisithi, olu khetho lufumaneka kuphela kwezinye iindawo zemetropolitan apho kukho iindlela zokwenyani zokuthumela ngenqanawa ngeli xesha limiselweyo.
Umzekelo kwimeko ye Thenga i-iPhone 13 Pro okanye enye yeemveliso abanazo kwisitokhwe kwivenkile ye-intanethi ngaphakathi kwesixeko saseBarcelona okanye kufutshane, singakonwabela ukuthunyelwa ngeeyure ezimbini simahla.
Ukuhanjiswa kweeyure ezimbini nge-0 ye-euro ekuthengweni okwenziwe phakathi kwe-22 kaDisemba kunye ne-24, i-2021 ivulekele iimveliso ezithile ze-Apple kwezinye iindawo zedolophu, Ayiyonkonzo esebenzela abo bahlala kumgama oziikhilomitha ezili-100 ukusuka kwivenkile esemthethweni. Le nkonzo ayifumaneki kwiikhompyuter zeMac zesiko, iimveliso ezikroliweyo, kunye neeodolo ezithile, ezifana nezo zihlawulwe ngenkxaso-mali okanye ukudluliselwa kwebhanki. Ixesha lokuhambisa lixhomekeke kwidilesi ekhethiweyo, ukufumaneka kweemveliso kunye nexesha losuku umyalelo ubekwe.
Fumana ivenkile ukubona iiyure zokuvula okanye uye kwiphepha lokuphuma ukujonga ixesha lokuhambisa eliqikelelweyo. Kuyafuneka ukuba usayine ukuhanjiswa kolu hlobo kwaye njengoko besitshilo kunokuba luncedo kwabo bangenaxesha lasimahla kwaye bafuna ukuthenga imveliso ye-Apple ngeeholide. Icala eliphantsi koku kukuba lilinganiselwe kwiidolophu apho sele kukho iivenkile ze-Apple eziphathekayo, ngoko kwiimeko ezininzi kungcono ukusondela kuzo ukuze uthenge. Yiba njalo inkonzo iya kuba simahla iintsuku ezimbalwa, ngoko ke xa uyifuna ungayisebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Ukuhanjiswa kwiiyure ze-2 ngexabiso le-€ 0 kwiivenkile ze-Apple zongezwa
I-DuckDuckGo iceba ukuphehlelela isikhangeli esizimeleyo seMac